Ama-plugins we-WordPress we-8 athakazelisayo kuwebhusayithi yakho | Kusuka kuLinux
Ama-plugins we-WordPress we-8 athakazelisayo wewebhusayithi yakho
Mthandeni_SA | | I-GNU / Linux, Ama-plugins we-Wordpress
WordPress Sekuphenduke enye ye amapulatifomu amakhulu okuphatha amakhasi e-web, futhi ngayo ehlukahlukene ama-plugin elenza lula umsebenzi wethu kuleli thuluzi.
Lezi yisishiyagalombili ama-plugin bazokwenzenjani i-WordPress ethokomele futhi elula:
Indawo Yami Eyimfihlo- Yenza iwebhusayithi ibe yimfihlo futhi izobonakala kuphela kubasebenzisi ababhalisiwe. Uma umsebenzisi ongabhalisiwe ezama ukubuka ikhasi noma ukungena, bazokwethulwa ngesikrini sokungena ngemvume se-WordPress.
Izindikimba eziningi: ikuvumela ukuthi unikeze izingqikithi ezahlukahlukene ezingxenyeni ezahlukahlukene zewebhusayithi yakho, kepha ayithinti iphaneli labaphathi.
Amakhodi amafushane noma kuphi noma yonke indawo: ikuvumela ukuthi usebenzise izinqamuleli ze-WordPress cishe noma kuphi kuwebhusayithi yakho (izihloko zamakhasi, izihloko zokuthunyelwe, isihloko sewebhusayithi nencazelo yaso, phakathi kwabanye).
Veza ama-plugins acushiwe enethiwekhi: Kumawebhusayithi anabaphathi abaningi, kukhombisa konke ama-plugin ezisetshenziswayo futhi kuphi. Imvamisa i-WordPress ifihla enye yayo ama-plugin futhi leli thuluzi konke okukhona kuphaneli yabaphathi, futhi kwesinye isikhathi okunganakwa.
Ngikhumbule: Ivumela umphathi ukuthi abeke ibhokisi elithi “ngikhumbule” lapho engena kuwebhusayithi futhi abasebenzisi bazofaka igama nephasiwedi yabo kanye njalo emavikini amabili. Ngaphandle kwaleli bhokisi, abasebenzisi kuzofanele bafake amagama abo ne-password isikhathi ngasinye lapho bevakashela leli khasi.
Ikhalenda elihlala njalo: iphatha izinsuku ezisukela eminyakeni engama-6500 edlule kuya eminyakeni engama-8000 ngokuzayo, futhi ivumela abasebenzisi ukuthi bazi usuku lwesonto kunoma yiluphi usuku abangena ngalo.
Khombisa Ukushona Kwekhishi: abasebenzisi abajwayelekile bangabona kuphela umugqa wokuqala wezithonjana ze-WordPress. Le plugin iphoqa umugqa wesibili wezithonjana ukuthi uboniswe njalo, kokubili kuphaneli yabaphathi nasemakhasini weposi.
Ama-Shortcode Wonyaka Wamanje ne-Copyright- Izinqamuleli ezisheshayo nezilula zokubonisa izimpawu zamanje nezamalungelo obunikazi.
Lezi eziyisishiyagalombili ama-plugin ilandwe cishe izikhathi ezingama-215.000 emhlabeni jikelele. Ukubenza bahlale ngokuhamba kwesikhathi, ungaya ekwamukelweni kwabo: Lokhu kungenziwa lapho umnikazi we i-plugin ufuna ukuqhubeka nenye iphrojekthi noma ube nezimo ezithile zomuntu siqu ezingakuvumeli ukuthi uqhubeke nokuyixhasa.
Njengoba i-WordPress ithandwa ngendlela emangalisayo, ihlala ihloselwe abaduni ngakho-ke inezibuyekezo eziningi zokuyigcina ivikelekile. Okufanayo kuya ama-plugin, okumele zivuselelwe njalo. Lapho i- i-plugin iyeka ukuthola ukwesekwa okuvela kumdali wayo futhi ithandwa kakhulu, kunamathuba amaningi okuthi iyoba isisulu kubaduni. Ngakho-ke Kunconywa ukuthi kuthengwe kuphela labo abanezibuyekezo zakamuva.
Le yindlela isinyathelo se- umaki "ngamukele": abadali ababefuna ukuqhubeka namanye amaphrojekthi, kepha bengafuni ukushiya eyabo ama-plugin Okungagadiwe kungasebenzisa le thegi ku-WordPress.org. Ngale ndlela, omunye unjiniyela wamukelekile ukubuka, ukuhlola futhi mhlawumbe athathe iphrojekthi ukuqhubeka nayo.
Lokhu kungaba yinto eyanelisa kakhulu kubahleli bohlelo, ngoba kuzobavumela ukuthi bahlangane nabathuthukisi emhlabeni jikelele, babone umsebenzi abawenzayo nezinselelo ababhekana nazo.. Umqondo ukugcina lezi ama-plugin izimpahla futhi ubhekane nanoma yiziphi izinsongo zokuphepha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » wordpress » Ama-plugins we-Wordpress » Ama-plugins we-WordPress we-8 athakazelisayo wewebhusayithi yakho
Ungakusebenzisa kanjani amandla we-laptop yethu nge-TLP
Servo, okusha okuvela eMozilla.